Maxaa ka soo baxay kulankii dhexmaray Madaxweyne Farmaajo & Xildhibaano Boqol ku dhow? – Mudug24
Homewararka DalkaMaxaa ka soo baxay kulankii dhexmaray Madaxweyne Farmaajo & Xildhibaano Boqol ku dhow?
Maxaa ka soo baxay kulankii dhexmaray Madaxweyne Farmaajo & Xildhibaano Boqol ku dhow?
July 16, 2020 admin wararka Dalka, Wararka maanta 0
Waxaa soo baxaya faahfaahino ku saabsan kulan saacado socday oo xalay ku dhexmaray Villa Somalia Madaxweynaha Somalia Maxamed C/llaahi Farmaajo iyo Xildhibaano ka tirsan golaha shacabka oo tiradoodu boqol ku dhoweyd.
Xildhibaanadan ayaa Madaxweynaha kala hadlaya arrimaha doorashada, iyagoo ka soo horjeeda in doorasho dadban ay ay ka dhacdo dalka, waxayna warar ku dhow dhow kulankaas sheegayaan in xubno ka tirsan xildhibaanada ay Maadaxweynaha ka codsadeen inuu u cadeeyo mowqifkiisa ku addan doorashada soo socota nooca ay noqon doonto.
Xildhibaanadan ayaa sidoo kale ku doodaya in la fuliyo sharciga doorashooyinka dalka, isla markaana ay doorashadu noqoto mid qof iyo cod ah, sida ku cad sharcigaas oo kol sii horeysay baarlamaanku ansixiyey, madaxweynuhuna saxiixay.
Sidoo kale xildhibaannada ayaa Madaxweynaha la wadaagay walaacooda ku saabsan shirka Dhuusamareeb, iyagoo sheegay waxa ka socda halkaas aysan sax aheyn, isla markaana maamul goboleedyada aysan sharci u heysan inay go’aan ka gaaraan doorashada dalka.
Sida aanu wararka ku heleyno Farmaajo ayaa Xildhibaanadan u sheegay in inta uusan cadeyn mowqifkiisa uu tagi doono magaalada Dhuusamareeb, wixii uu kala soo kulmana uu iyaga kula soo laaban doono.
Arrintan ayaa ku soo beegantay xili shalay Guddoomiyaha Golaha Shacabka Maxamed Mursal uu fadhigii baarlamanka ka sheegay in aanay aqbaleyn doorasho dadban, wixii shuruuc ah oo doorashada ku saabsana uu Baarlamaanka xaq u leeyahay, Dowlad Goboleedyadana aysan shaqo ku laheyn.
Guddoomiye Mursal” Maamul Goboleedyada go’aan kama gaari karaan qaabka ay noqoneyso doorashada”
Baraha Twitterka ee Madax iyo Maalqabeeno caan ah oo si baahsan loo jabsaday